လူသားမဆန်သူများသို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူသားမဆန်သူများသို့ 
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 11, 2011 in Creative Writing, Think Different | 20 comments
ကဗျာ ဒွါရာဝတီမဂ္ဂဇင်း လူသားတို့ အတွက်ထွက်ပေါက်
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ မြို့ ကလေးက ပကတိတည်ငြိမ်နေတဲ့ တောင်သုံးလုံးချောင်ထဲမှာဝပ်တွားနေတဲါမြို့ငယ်လေးပါ။ပတ်လည်ဝန်းရံထားတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ရွှေဆံတော်၊ရွှေနံတော်၊ရွှေအံတော် ဘုရားသုံးဆူရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ
ကျွန်မတို့ မြို့မှာ ဖတ်ရခဲ၊ထွက်ဖို့ ရာ ရင်တမမနဲ့ စောင့်ရတဲ့ ၊နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ တစ်ကြိမ်ပုံနှိပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြို့နယ် မဂ္ဂဇင်းလေးတစ်ခု ဒီနှစ်မှာပြန်လည်မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ ၂၀၁၁ခုနှစ်ထိ သုံးကြိမ်ဘဲ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၁)ကို ၁၉၇၉ ခုမေလ၊အမှတ်(၂)ကို ၁၉၉၄ခု၊အမှတ်(၃)ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာပြန်လည်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။ဒီလိုကြောင့်ကြနေရတာကလဲ အခက်အခဲမျိုးစုံကြောင့်ပါ။ဒီတစ်ကြိမ်မှာ တော့ ဖြစ်မြောက်အောင်စွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာ အဓိက အခရာကျသူက အသျှင်ကောသလ္လ(ဂဝေသီ)ပါ။ဆရာတော်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်မှာ ဒေါက်တာမောင်မောင်(မောင် ဆေး-၂)တို့ ၊ဒေါက်တာတင်ငွေတို့ အားလုံးသော စာပေကိုချစ်မြတ်နိုးသူများ၊ဒေသပေါ်သံယောဇဉ်ကြီး ကြတဲ့ စာသမားတွေ၊အနုပညာသမားတွေ တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားကြတဲ့ရလဒ်မို့သံတွဲမြို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ ဆရာတို့ ရေ။
ဒီနေ့ က ဆရာတို့ ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ အသီးအပွင့်လေးဖြစ်တဲ့ ရတနာစာအုပ်လေးက ကဗျာတပုဒ်ကို. ပြန်ဝေမျှပေးချင်ယုံသက်သက်ပါ။MG ရွာသားတွေရော ပြန်ပြီး ဖတ်စေချင်လို့ ပါ။
ကျွန်မရွေးထားတဲ့ ကဗျာက ဆရာဆောင်းသစ်(သံတွဲ)ရေးဖွဲ့ တာပါ။စာရေးသူ ကဗျာဆရာက သူ့ အတွေးနဲ့ ခံစားရေးဖွဲ့ ခဲ့တာဆိုပေမယ့်၊ဆရာဟာ ယနေ့ ခေတ်ကိုသရော်ထားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။သူတော်ကောင်းတရား (၇)ပါး ကို ရတနာလိုတူးဆွရှာရတော့မလို ရှားပါးနေလေတော့ ဆရာက အပြစ်ဖို့ လဲ မနည်းဘူးဆိုရတော့မှာပါ။
သူ့ စံနဲ့ သူ ဆန်းကြယ်မက်ပိုင်ခွင့် အနိမ့်အမြင့်
အနုအရင့် အရွယ်အစား မညီမညာ
အရောင်အသွေး အထူအပါး မတူမညီ
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တို့ 
ပုံမှန်များ ရိုးရာ မပျက်ရှိသည်
ဒီ မဂ္ဂဇင်းလေးကို ထုတ်ဝေသူ ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အရှုံးခံထုတ်ဝေခဲ့ တာပါ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြို့သားတွေစာဖတ်တာသိပ်နည်းလာတယ်။ရောင်းရ သင့်သလောက်ကိုမစွံ့ သေးဘူး။ဒါပေမယ့် အဆီအနှစ်တွေ၊စာပေ အရသာ အပြည့်ပါတဲ့ စာအုပ်လေးကို သံတွဲသားတွေကို ဝယ်ပါ၊ဖတ်ပါ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။လက်လှမ်းမမီတဲ့ စာအုပ်တွေကိုရှာနေမယ့်အစားနီးရာဒီ စာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ။အဖြေရှာပါ။တွေ့ တဲ့အဖြေကမှန် သလားသုံးသပ်ပါ ဆွေးနွေးပါ၊
လောကတွင် ဆင်းရဲသမျှထဲတွင် အသိဥာဏ်ချို့ တဲ့ခြင်းကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက် အပေါ်မနာလို မုန်းတီးစိတ်နဲ့မျက်ကန်းဆင်တောတိုးသလိုတိုးနေမယ့်အစား မိမိကို မိမိ ငါဘယ်လို လူစားမျိုးလဲသုံးသပ်ဝေဖန်ပြီးမှ သူများကိုလက်ညှိုးထိုးတာပိုသင့်ပါမယ်။ဒါပေမယ့်နော်…. သူများကိုလက်ညှိုးထိုးတာလက်တစ်ချောင်းထဲပါ ကိုယ့်ဖက်ကို လက်လေးချောင်း ထိုးထားတာကိုတော့ အသိလေးရပါဦးနော့
ဒီဆောင်းပါးပို့ စ်လေးနဲ့ တူ ဒွါရာဝတီမဂ္ဂဇင်းကော်မတီအပေါ် မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းပါစေသားဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“လူဆိုးလူမိုက်တို့ သည် နည်းလွဲနည်းမှားများကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ဟုကျင့်ကြံကြဧ။်”(အရှင်ဥာဏိဿရ)
အမှားကိုသိ၍ အမှန်ကိုပြင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အသိခေါက်ခက် ၀င်နက်သတဲ့.. လူကဲထက် စိန်ကဲ ကပိုလွယ်တယ်ဆိုတာ အလကားမဟုတ်ပါ..
ဒေ၀ဒတ် လိုမျိုးတွေ… ထိတာတောင် မနာနိုင်သေးတာ ထူးဆန်းတယ်.. ။
အမှန်ကိုမှ မပြင်တော့တာ မမီးမီးသော်ရဲ့ ၊ ကျနော်ပြောသလို ရဲအောင်လံ ကားဂိတ်ကို အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့
သပိတ်မှောက် ကြပါစို့ ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးမကျ မိုက်မဲမှုကြောင့် ဂိတ်ပိုင်ရှင်သူဋ္ဌေး စိတ်ညစ်ရတော့
မယ် ၊ သူခိုးလက်ခံ ထားတာလဲ အပစ်တစ်မျိုးပါဘဲ ၊ သိနေရက်သားနဲ့ ၊
ဆရာမ မီးမီးသော်ရေ…ဖတ်မိတာ စိတ်မကောင်ပါဘူး…သံတွဲသူ၊သံတွဲသားတွေ (လူငယ်တွေ)စာဖတ်အားကောင်းလာအောင် ကြော်ဌာလေးတော့နည်းနည်းလိုမယ်ထင်တယ်…အရောင်းမစွံဖြစ်နေရင် မျက်နှာဖုံးကာဗာမှာ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ မင်းသမီးတွေရဲ့ပုံလေးတွေထဲ့ပြီးရောင်းအားမြှင့်တင်ကြည်ပါလား..အပြင်ဗန်းက သူတို့ကြိုက်တာလေးတွေနဲ့စွဲဆောင်ကြည့်မယ်..အတွင်းမှာ အနှစ်ပါတဲ့စာသားလေးတွေနဲ့စည်းရုံးမယ်…စဉ်းစားမိတာကို အကြံပေးတာနော်..ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုသစ်မင်းရေ. ကြိုးစားပြီးတင်ပြသွားပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ခုလိုဝင်ရောက်အားပေးဖော်ရလို့ ပါ။ကိုဇော်မင်း ပြောပြတာကိုရောဘဲ ကျေးဇူးပါ။
စာပေလောက မှာ ဖတ်သူ နည်းပါးမှုကို စာပေလောက သားတိုင်းခံစားနေရပါတယ် ။ကိုယ် တို့ နိုင်ငံမျာ စာဖတ်သူများလာဖို့သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ အခုတော့ စာအုပ် ထုတ်ဝေမှု အုပ်ရေ..နဲ့ဖတ်သူ ဦးရေ… အချိုးအစားက သိပ်ကို ကွာ…နေပါပြီ။
ဒီပြသနာကို အားလုံးပါဝင်ပြီး….ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ် ။
အခုလို အသိပေးတဲ့ စာလေးတွေ က စပြီးတော့ပေါ့..။
ကျေးဇူးပါ အလင်းဆက်ရေ။မကြာမီ ကျွန်မတို့ စေတနာညကျောင်းလေး တစ်ခုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို၊ဒေသက ကလေးတွေအတွက်စာပေဟာပြောပွဲများများ ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ကြဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားနေပါတယ်။
ခုလိုအကျိုးပြုလေးတွေနိုင်သလောက်လုပ်ကြ ဖို့ နေရာမှာ အဖျက်အမှောက် တွေကရှိလေတော့. ခေါင်းစဉ်ကို လူသားမဆန်သူများလို့ တပ်လိုက်ရတာ ပါ။
မမီးမီးသော်ရဲ့ ပို့ စ် ကို ဖတ်ပြီး
ဆရာသုမောင် ရဲ့ စာဟောပွဲ ကို သွားသတိရသဗျ
“ အမောင်တို့ စာများများ ဖတ်ကြပါ ၊ အကုန်ဖတ်ကြပါ
အယုတ်စွဆုံး ဟိုစာဒီစာတွေ လည်း ဖတ်ကြပါ
အဲ..ဖတ်ပြီးရင်တော့ ၊ အကုန်မယူကြနဲ့ ပေါ့ ။
ကောင်းတာကို ယူမယ် ဆိုရင် ၊ အမောင် တို့ အတွက် အကျိုးအမြတ်အများကြီးရမယ် ” တဲ့
မမီးမီးရေ .. ။ ဒွါရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းအကြောင်းပြောရင်တော့ ဆရာတော် ရှင်ကုသလကိုမေ့ထားလို့မရဘူးနော် ။ရန်ကုန်ကိုတစ်ပါးတည်းသွားပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ ။ ထုတ်ဝေသူက ဒေါက်တာတင်ငွေပါ ။ သံတွဲသားတွေစာဖတ်အားနည်းတယ်လို့တော့ မထင်မိသေးဘူး ။ မမီးမီး သံတွဲမြို့မှာကျင်းပတဲ့ စာပေပြိုင်ပွဲတွေကို သွားပြီးမလေ့လာ မိသေးဘူးနဲ့တူတယ် ။ ဒီနှစ်စာဆိုတော်ရာသီရောက်ရင် ပြိုင်ပွဲတွေမှာသွားလေ့လာလိုက်ပါ ။ စာပေချစ်သူတွေသံတွဲမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ် ။ ဆရာ မောင်(ဆေး-၂)ကတော့ သူကြိုးစားခဲ့တဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေးကို မြင်တွေ့ခွင့်မရသွားခဲ့ပါဘူး ။ စာပေချစ်တဲ့ဆရာ ၊ အနုပညာကိုမြတ်နိုးတဲ့ဆရာ ကောင်းရာဘုံဘ၀ကနေ၀မ်းသာနေမှာပါ ။
ကိုရဲတေဇာရေ ဟုတ်ပါတယ်။ခုလိုချိန်မှာ ဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်ရှိနေချင်ပါတယ်။သူ့ လဲတတ်စွမ်းသရွေ့ ကြိုးစားသွားခဲ့တာပါဘဲ။ခုလို အပြုသဘောဆွေးနွေးအကြံပေးလို့ ကိုရဲတေဇာကိုကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ မမီးမီးရေ ရွာထဲမှာ ခုလို သံတွဲဒေသရဲ့ကောင်းသတင်းလေးတွေပဲ မွှေးပျံ့နေစေချင်ပါတယ် ။ သံတွဲကဆိုရင် လူအထင်သေးတဲ့အဖြစ်တွေကို မလိုချင်တော့ဘူး ။ ကုန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေမှာ သံတွဲက ရွာထဲမှာတော်တော်နာမည်ထွက်သွားတာနော် ။ မမီးမီးတို့လို ရွာသက်ရင့်နေတဲ့သူတွေက ဦးဆောင်ပြီး ပြန်ထိမ်းသိမ်းပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
သံတွဲမှာ တကယ်အထင်ကရ နေရာတွေရယ်လို့ တော့ပေါများလှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။လာလည်စရာ ငပလီကမ်းခြေ ရယ်၊တောရိပ်တောင်ရိပ်လေး တွေနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ တောမြို့လေးပါ။
လယ်ထွန်ပြီးစပါးပင်စိုက်တာကမှ ဆန်ရဘို့ နီးစပ်သေးဒယ်
ကိုဂျော်နီကြီး ကတော့လေ ပြောရော့မယ်။ဝန်းဇင်းမင်းရာဇာတောင်မှ လယ်ထွန်ရင်းစာဖတ်ခဲ့တာ နောင်စာဆိုကဝိပညာရှိကြီး ဖြစ်ခဲ့တာလေနော့။
ဆူပွက်လျှက်ရှိသည် “ အစား..
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တို့ ဆူပွက်လွန်းလာ၍
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာသည် လို့ ဆိုချင်သဗျ။
True Answer ပြောတာလဲ မှန်ပါတယ်ရှင်။ဒီကိစ္စကို အသွားအပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။vice versa သဘောပါဘဲ။
ကျွန်မတော့ ”စာများများမြင်ရင် ဖတ်ချင်ဘူး ပျင်းတယ်” လို့ပြောတဲ့လူတွေ အတွေ့များတယ်။ နောက်ပီး မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအများစုက မက်ဂဇင်းဖတ်ရင်တောင်မှ မင်းသမီးပုံဘဲကြည့်တယ်၊ မင်းသား မင်းသမီးအင်တာဗျူးကြည့်တယ်၊ ၀တ်တုတိုဆိုလုံးဝမဖတ်ဖူး။